Image Filter Bar
This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.
रङ छविको रङ मानहरू उल्टो पार्दछ,वा ग्रे स्केल छविको चम्किलोपना मानहरू उल्टो पार्दछ।
एउटा छविमा व्यतिरेक नरम पार्दछ।
एउटा छविमा व्यतिरेक बढाउँदछ।
एउटा छविबाट एकल पिक्सेलहरू हटाउँदछ।
पारिभाषिक सौर्यीकरणका लागि एउटा संवाद खोल्दछ। सौर्यीकरण ले एउटा प्रभाव सन्दर्भ गर्दछ जुन फोटो विकासमा त्यहाँनिकै धेरै प्रकाश भएको बेलामा केही हुन सक्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ। रङ आंशिक रूपमा उल्टा बन्दछ।
सौर्यीकरणको प्रकार र डिग्री वर्णन गर्दछ।
Specifies the degree of brightness, in percent, above which the pixels are to be solarized.
सौर्यीकृत गरिनुपर्ने पिक्सेलहरू पनि उल्टो पार्नु पर्दछ भन्ने वर्णन गर्दछ।
पाको हुदै कार्य सेट गर्नका लागि एउटा संवाद खोल्दछ। हरेक पटक तपाईँंले यो कार्य बोलाउदा छवि केही मधुरो देखिन्छ, रङहरू अझ खरानी रङको वा खैरो बनाउन सकिन्छ।
प्रतिशतमा उमेरको तीव्रता परिभाषित गर्दछ। 0% मा तपाई सबै पिक्सलका ग्रे मानहरू देख्नुहुन्छ। 100% मा मात्र रातो रङ च्यानल अवस्थित छ।
पोष्टर रङहरूको सङ्ख्या निर्धारण गर्नका लागि एउटा संवाद खोल्दछ। यो प्रभाव रङको सङ्ख्याको घटाउमा आधारित हुन्छ। यसले फोटोहरूलाई हस्त चित्र जस्तो देखिने बनाउँदछ।
छवि घटाउनुपर्ने रङहरूको सङ्ख्या वर्णन गर्दछ।
एउटा छविलाई पप-कला ढाँचामा बदल्दछ। रङ एलिएनेसन द्वारा, छविले पूर्णतया नयाँ क्यारेक्टर प्राप्त गर्दछ।यो कार्य पूरा छवि वा यसको कुनै भागमा लागू हुन्छ।
छवि लाई कोईला स्केचको रूपमा प्रदर्शन गर्दछ। छविको रूपरेखा कालोमा कोरिएको छ,र मौलिक रङहरू दवाईएको छ। तपाईँंले यो कार्य पूरा छवि वा यसको कुनै भागमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
राहत सिर्जना गर्नका लागि संवाद प्रदर्शन गर्दछ। तपाईँंले काल्पनिक प्रकास स्रोतको अवस्था रोज्न सक्नुहुन्छ जसले सिर्जना गरिएको छायाँको प्रकार निर्धारण गर्दछ र कसरी राहतमा ग्राफिक छवि देखा पर्छ भन्ने निर्धारण गर्दछ।
प्रकाश स्रोत अवस्था वर्णन गर्दछ। एउटा थोप्लो ले प्रकाश स्रोत प्रतिनीधित्व गर्दछ।
पिक्सेलको सानो समूह उस्तै रङको आयातकार क्षेत्रमा जोड्दछ। जती ठुला अलग अलग आयातनहरू हुन्छन,त्यती थोरै नै ग्राफिक छविमा बिवरण हुन्छ।
आयतनहरू भित्र जडान गर्नुपर्ने पिक्सेलहरूको सङ्ख्या निर्धारण गर्दछ।
अलग अलग टाईलहरूको चौडाइ निर्धारण गर्दछ।
अलग अलग टाईलहरूको उचाइ निर्धारण गर्दछ।
वस्तुको किनाराहरू, बृद्धि गर्दछ ,वा तिखो पार्दछ।
बिटम्पाप्स घुसाउँदा,सम्पादन ,बचत गर्दा
Title is: Image Filter Bar